पूर्वी पहाडि जिल्लाका नागरिक तराईका महँगा अस्पतालमा पुग्नुपर्ने वाध्यता
२०७६ असार ३१ मंगलबार, पाँचथर। दरवन्दी अनुसारका डाक्टर अस्पतालमा नआउँदा पूर्वी पहाडि जिल्लाका वासिन्दा तराईका महँगा अस्पतालमा पुग्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ। पहाडी जिल्लामा रहेका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाको अभाव हुँदा तराईका अस्पतालको भर पर्नुपरेको हो। ... बाँकी अंश»
जङ्गली च्याउ खाँदा एक बालकको मृत्यु, १२ जना बिरामी
२०७६ असार २९ आइतबार, गलेश्वर । म्याग्दीमा जङ्गली च्याउ खाएर सिकिस्त बिरामी भएका एक बालकको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
विपीका उपकुलपति घूस लिँदालिँदै रङ्गेहात पक्राउ
२०७६ असार २७ शुक्रबार, काठमाडौँ । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति प्रा डा राजकुमार रौनियार र प्रतिष्ठानका डा रामहरि रौनियार रु आठ लाख घूस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार २६ बिहिबार, डडेल्धुरा । डडेल्धुरा अस्पतालमा ड्युटीमा खटिएका चिकित्सकमाथि पुनःआक्रमण भएको छ । शव परीक्षण गरिरहेका चिकित्सकलाई ढिलो गरेको भन्दै हातपात गरिएको बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार २३ सोमबार, धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको कार्यकारीणी समितिको सदस्यमा प्रतिष्ठानका हाडजोर्नी विभाग प्रमुख डा. पशुपति चौधरी मनोनित भएका छन् । ... बाँकी अंश»
ई-सिग्रेटले स्वास्थ्य जोखिम, गर्छ मस्तिष्कको स्नायू तन्तुलाई नष्ट
२०७६ असार १७ मंगलबार, वासिङ्टन । परम्परागत सूर्ती सेवनको विकल्पमा प्रयोग हुने गरेको ई– सिग्रेट (विद्युतीय चुरोट)ले पनि स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने गरेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ । ... बाँकी अंश»
खानै पर्ने दहीको यस्तो छ महत्व
२०७६ असार १५ आइतबार, काठमाडौं । असार १५ गते देशभर धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण’ भन्ने नाराका साथ १६ औं धान दिवस मनाइँदै छ । ... बाँकी अंश»
कस्ता मानिसलाई बढी टोक्छ लामखुट्टेले ?
२०७६ असार १३ शुक्रबार, काठमाडौं । लामखुट्टे परजीवी हो । उसले अरुको रगत चुसेरै आफ्नो ज्यान पाल्ने हो । उसले मानिसलाई टोक्दा कस्ता मानिसलाई टोक्छ त ? ... बाँकी अंश»
बाँझोपनबाट आजित प्रतिभाले सुदुरपश्चिममै पाइन् उपचार
२०७६ असार ११ बुधबार, काठमाडौं । सुदुरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक दुरबिन प्रविधिबाट पाठेघर भित्रको परिक्षण तथा उपचार गर्ने हिस्टेरोस्कोपी सुरु भएको छ । निजि क्षेत्रबाट संचालित धनगढीको सुविधासम्पन्न निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा यो उपचार भएको हो । ... बाँकी अंश»
बालबालिकाको आँखासम्बन्धी जटिल समस्या
२०७६ असार १० मंगलबार, महोत्तरी । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका क्षेत्रमा स–साना उमेरका बालबालिकामा आँखासम्बन्धी जटिल समस्या भेटिएको छ । नगरपालिकाको सहकार्यमा महाकरुणा समाज नेपालले सञ्चालन गरेको बुद्ध आँखा केन्द्रले पछिल्लो एक महीनाको अवधिमा गरेको विद्यालय केन्द्रित आँखा परीक्षणमा यस्तो समस्या पाइएको हो । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार ७ शनिबार, काठमाडौं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र र ५९ जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालहरुको प्रयासमा नेपालमा पहिलोपटक स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन भएको छ। संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक स्थापित भयो कि भएन र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरे नगरेको विषयमा केन्द्रीकृत रहेको वर्ष पुस्तक शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको हो। ... बाँकी अंश»
क्यान्सरका बिरामीको दुखाइ र थकान कम गर्छ संगीतले
२०७६ असार ४ बुधबार, काठमाडौं । प्रतिदिन ३० मिनेटसम्म संगीत सुन्नुले क्यान्सरका बिरामीमा दुखाइ कम गर्नसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । ताइवानका वैज्ञानिकले आफ्नो एक अध्ययनमा यस्तो दाबी गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
क्यान्सरबाट छटपट्एकी आङदेम्वेलाई सहयोग रकम प्रदान, सवैलाई सहयोग गर्न अपिल
२०७६ असार ४ बुधबार, पाँचथर । स्तन क्यान्सरबाट थलिएर उपचार गराइरहेकी आर्थिक स्थिति कमजोर भएकी पाँचथर फाल्गुनन्द २ की उर्मिला तुम्बापो आङदेम्बेलाई सहयोग रकम जुटेको छ । ... बाँकी अंश»
केरा खानुस् फाइदै फाइदा छ
२०७६ असार ४ बुधबार, काठमाडौं । केरा कसलाई मन पर्दैन होला र ? चिसो लाग्नेले केरा नरुचाउन सक्छन् । तर केरा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा सबैलाई मन पर्ने फलमा पर्छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार ३ मंगलबार, जिल्लामा बिहे गर्ने उमेर अगावै गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको सङ्ख्या बढदै गएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार २ सोमबार, पूर्वी तराईका जिल्लामा देखा परेको डेंगु नियन्त्रण हुन नसक्दा फैलिएर बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ । डेंगु फैलिँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्य निकायलाई चुनौती थपिएको छ । ती निकायबीचमा समन्वय नहुँदा पछिल्लो समय डेंगु फैलिनेक्रम जारी रहेको छ । ... बाँकी अंश»
आयुर्वेद औषधि पसलमै ‘सिलबन्दी’
२०७६ जेठ ३२ शनिबार, नेपालगञ्ज । अवैधरुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै नेपालगञ्जको एक आयुर्वेद औषधि पसललाई ‘सिलबन्दी’ गरिएको छ । शुक्रबार गरिएको ... बाँकी अंश»
२०७६ जेठ २७ सोमबार, पाल्पा । रामपुरका भीमबहादुर कुमालको मिर्गौलाले काम नगर्ने भएपछि समस्या भएको छ । विगत २२ महीना अगाडि रोजगारको सिलसिलामा खाडी मुलुक बहराइन पुगेका रामपुर नगरपालिका–८ पाल्पा निवासी ३१ वर्षका कुमालको दुईवटै मिर्गौलाले काम नगर्ने भएको हो । ... बाँकी अंश»
२०७६ जेठ २७ सोमबार, बझाङ । बझाङका सुत्केरीले ११ महीनादेखि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सुत्केरी प्रोत्साहनबापतको भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले साउनदेखि सुत्केरी भत्ता नपाएको गुनासो गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»